Ciidamada Syria oo buux dhaafiyay deegaan ku yaala xadka dalkaasi la wadaago Turkiga… – SBC
Ciidamada Syria oo buux dhaafiyay deegaan ku yaala xadka dalkaasi la wadaago Turkiga…
Ciidamada Syria oo buux dhaafiyay deegaan ku yaala xadka Turkiga iyo Dowlada Britain oo muwaadiniinta ugu baaqday in ay ka baxaan dalkaasi.
Ciidamada Syria oo wata dabaabadaha dagaalka ayaa buux dhaafiyay deegaanka Badama ee ku yaala xadka Syria ay la wadaagto Turkiga,waxaana halkaasi ay ku qabqabteen tobonaan qof oo ka tirsan dadka deegaanka.
Ciidamada ayaa gabi ahaanba Magaalada Badama waxaa ay ka xireen afarta dhinac,iyadoona haatan ay sii kordhayso tirada dadka ay qabqabanayaan Ciidamada Syria,gaar ahaana ay ku eedeynayaan in ay ka tirsan yihiin kooxo hubaysan oo weerar kusoo qaaday.
Waxaa aad kor ugu sii kacay tirada barakacayaasha Syrian-ka ah ee gaaraya Turkiga,waxaana ay Dowlada Turkigu sheegtay in ay haatan dadkaasi kor u dhaafayaan ilaa 10,000 oo qof.
Dowlada Britain ayaa iyaduna bilowday in ay muwaadiniinteeda uga yeerato Syria,iyadoona goor sii horaysay bilowday in ay soo daad gurayso diblomaasiyiinteeda dalkaasi.
Dowlada Germany waxaa iyaduna dhinaceeda ay sheegtay in aanay taageersanayn faro galin Milatari oo lagu sameeyo dalkaasi,waxaana taa badalkeeda ay ku baaqday in dowlada Syria lagu cadaadiyo joojinta dhibaatada ay ku hayso shacabka.
Xukuumada Syria waxaa ay ku adkaysanaysaa in ay sii wadayso howl galada ay ka fulinayso deegaanada ku yaala xadka Syria iyo Turkiga,waxaana ay sheegtay taasi in ay uga gol leedahay in ay ku adkayso Amaanka dalkeeda iyo in ay uga hortagto kooxaha hubaysan ee kharbuday Nidaamka dalkeeda.
SBC Internatioal Monitoring.